Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Meri, Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kannada Kikamba Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Kyangonde Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi (Shahmukhi) Romanian Russian Réunion Creole Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Valencian Venda Vietnamese Welsh Yoruba Zapotec (Quiatoni) Zulu
Olee otú nwa agbọghọ na-amaghị nwoke si nwee ike ịmụta nwa?
Gịnị mere o ji bụrụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-amụ Jizọs?
Meri ọ̀ bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ndụ ya niile?
Meri ọ̀ bụ ‘onye a tụrụ ime ya n’ejighị njọ’?
Olee otú anyị kwesịrị isi na-ele Meri anya?
Baịbụl kwuru na Meri, nne Jizọs, ka Chineke nyere ihe ùgwù nke ịmụ ọkpara Chineke mgbe ọ ka bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. E bula ụzọ buo amụma nke a na Baịbụl n’akwụkwọ Aịzaya, kwuokwa mgbe o mezuru n’Oziọma Matiu na Luk.
N’otu amụma e buru banyere mgbe a ga-amụ Mesaya, Aịzaya onye amụma kwuru, sị: “Lee! Nwa agbọghọ ahụ ga-atụrụ ime, ọ ga-amụkwa nwa nwoke.” (Aịzaya 7:​14) Onye dere Oziọma Matiu si n’ike mmụọ nsọ kwuo na amụma Aịzaya a mezuru mgbe Meri dị ime Jizọs. Mgbe Matiu kwuchara na Meri tụụrụ ime n’ike mmụọ nsọ, ọ sịrị: “Ihe a niile mere ka ihe Jehova kwuru site n’ọnụ onye amụma ya wee mezuo, nke sịrị: ‘Lee! Nwa agbọghọ ahụ na-amaghị nwoke * ga-atụrụ ime, ọ ga-amụkwa nwa nwoke, a ga-agụ ya Ịmanuel,’ nke pụtara, ma a sụgharịa ya, ‘Chineke Nọnyeere Anyị.’”​—Matiu 1:​22, 23.
Onye dere Oziọma Luk kọkwara otú Meri si tụrụ ime n’ike mmụọ nsọ. O dere na Chineke zigara mmụọ ozi Gebriel “ka ọ gakwuru nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke e kwere nkwa na otu nwoke aha ya bụ Josef ga-alụ, bụ́ onye si n’ụlọ Devid; aha nwa agbọghọ ahụ na-amaghị nwoke bụ Meri.” (Luk 1:​26, 27) Meri n’onwe ya kwudịrị na ya amaghị nwoke. Mgbe a gwara Meri na ọ ga-abụ nne Jizọs, onye bụ́ Mesaya ahụ, ọ sịrị: “Olee otú nke a ga-esi mee, ebe ọ bụ na mụ na nwoke ọ bụla enwetụbeghị mmekọahụ?”​—Luk 1:​34.
Ime Meri dị sitere n’ike mmụọ nsọ, nke pụtara na ọ bụ Chineke mere o ji kwe omume. (Matiu 1:​18) A gwara Meri, sị: “Mmụọ nsọ ga-abịakwasị gị, ike nke Onye Kasị Elu ga-ekpuchikwa gị. N’ihi nke ahụ, a ga-akpọ onye ahụ a ga-amụ onye nsọ, Ọkpara Chineke.” * (Luk 1:​35) Chineke si n’ụzọ ọrụ ebube bufee ndụ Ọkpara ya n’akpa nwa Meri, nke mere ka ọ dị ime.
Ihe mere Chineke ji kwe ka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke mụọ Jizọs bụ ka Jizọs nwee ahụ́ zuru okè ọ ga-eji gbapụta ụmụ mmadụ ná mmehie na ọnwụ. (Jọn 3:​16; Ndị Hibru 10:5) Ọ bụ Chineke bufere ndụ Jizọs n’akpa nwa Meri. Ka e mechaziri, o yiri ka mmụọ nsọ Chineke ò kpuchitere nwa ahụ e bu n’afọ ka ọ ghara inweta ezughị okè ọ bụla.​—Luk 1:​35.
Nke a mere ka a mụọ Jizọs ka ọ bụrụ mmadụ zuru okè, onye zuru okè otú ahụ Adam dị tupu ya emehie. Baịbụl kwuru banyere Jizọs, sị: “Ọ dịghị mmehie o mere.” (1 Pita 2:​22) Ebe ọ bụ na Jizọs bụ mmadụ zuru okè, ọ ga-enwe ike iji ndụ ya kwụọ ụgwọ ma gbapụta ụmụ mmadụ ná mmehie na ọnwụ.​—1 Ndị Kọrint 15:​21, 22; 1 Timoti 2:​5, 6.
Baịbụl ekwughị na Meri bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ndụ ya niile, kama o kwuru na Meri mụrụ ụmụ ndị ọzọ.​—Matiu 12:46; Mak 6:3; Luk 2:7; Jọn 7:5.
Baịbụl kwuru na Jizọs nwere ụmụnne ndị ọzọ
Mba. Dị ka akwụkwọ bụ́ New Catholic Encyclopedia si kwuo, ozizi onye a tụrụ ime ya n’ejighị njọ ‘bụ ozizi kwuru na Meri, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, ebughị mmehie pụta ụwa. Na o ketaghị MMEHIE MBỤ ahụ anyị ketara n’aka nne na nna anyị mbụ. Onye ọ bụla ọzọ bi n’ụwa ketara mmehie. Ma Meri dị iche, e ji AMARA pụrụ iche mee ka ọ ghara ibute mmehie ahụ si n’aka Adama na Iv.’ *
Ma, e nweghị ebe ọ bụla Baịbụl kwuru na Meri ebughị mmehie ahụ anyị ketara n’aka Adam. (Abụ Ọma 51:5; Ndị Rom 5:​12) Nke bụ́ eziokwu bụ na e nwere ihe Meri mere gosiri na o bu mmehie pụta ụwa. O wetara ihe a ga-eji chụọrọ ya àjà mmehie n’ụlọ nsọ dị nnọọ ka Iwu Mozis kwuru ka nwaanyị ọ bụla mụrụ nwa mee. (Levitikọs 12:​2-8; Luk 2:​21-​24) Akwụkwọ ahụ bụ́ New Catholic Encyclopedia kwuru, sị: ‘O nweghị ebe Akwụkwọ Nsọ kwuru ya hoo haa na Meri ebughị mmehie pụta ụwa. Ọ bụ Chọọchị ji aka ya kpebie ịkụzi ihe dị otú ahụ.’
Meri bụ nwaanyị nwere okwukwe, na-erube isi, dịrị umeala n’obi ma hụ Chineke n’anya. O so n’otu n’ime ndị rubeere Chineke isi anyị nwere ike ịmụta ihe n’aka ha.​—Ndị Hibru 6:​12.
N’agbanyeghị na Meri nwere ihe ùgwù nke ịbụ nne Jizọs, Baịbụl ekwughị na anyị kwesịrị ife Meri ofufe ma ọ bụ kpegara ya ekpere. Jizọs enweghị mgbe ọ kwanyeere nne ya ùgwù pụrụ iche, o nweghịkwanụ ebe ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha mee otú ahụ. Nke bụ́ eziokwu bụ na e wezụga n’Oziọma Matiu, Mak, Luk, na Jọn na otu ebe ọzọ n’akwụkwọ Ọrụ Ndịozi, e nweghị ebe ọzọ e kwuru ihe gbasara Meri n’akwụkwọ iri abụọ na abụọ ndị ọzọ dị n’Agba Ọhụrụ na Baịbụl.​—Ọrụ Ndịozi 1:​14.
O nweghị ebe ọ bụla e kwuru n’Akwụkwọ Nsọ na Ndị Kraịst oge mbụ kwanyeere Meri ùgwù pụrụ iche, ya fọdụzie ikpegara ya ekpere. Kama nke ahụ, Baịbụl kwuru na ọ bụ naanị Chineke ka Ndị Kraịst kwesịrị ife ofufe.—Matiu 4:10.
^ par. 2 N’amụma Aịzaya, okwu Hibru bụ́ ʽal·mahʹ e si na ya sụgharịta “nwa agbọghọ” nwere ike ịbụ nwa agbọghọ ma nwoke ma ọ bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. Ma Matiu si n’ike mmụọ nsọ jiri okwu Grik kacha doo anya bụ́ par·theʹnos kọwaa ya, nke pụtara “nwa agbọghọ na-amaghị nwoke.”
^ par. 4 Ụfọdụ ndị na-ekwu na ọ dịghị mma ikwu na Meri mụrụ “Ọkpara Chineke,” n’ihi na ọ na-eme ka o yie ka Chineke na nwaanyị ò nwere mmekọahụ. Ma, o nweghị ebe ụdị echiche ahụ dị n’Akwụkwọ Nsọ. Kama nke ahụ, Baịbụl kpọrọ Jizọs “Ọkpara Chineke,” kpọọkwa ya “onye e bu ụzọ mụọ n’ime ihe niile e kere eke” n’ihi na ọ bụ naanị ya ka Chineke kere n’onwe ya, bụrụkwa onye mbụ Chineke kere. (Ndị Kọlọsi 1:​13-​15) Baịbụl kpọkwara nwoke mbụ bụ́ Adam “nwa Chineke.” (Luk 3:38) Nke a bụ n’ihi na ọ bụ Chineke kere Adam.
^ par. 8 Mbipụta nke Abụọ, Mpịakọta nke 7, peeji nke 331.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Meri, Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke?
ijwbq isiokwu 153